TSMC bidoro imeputa igwe mmadu nke asaa 7nm + chip | Gam akporosis
Ozugbo TSMC, Taiwanese chipmaker, mara ọkwa na ọ ga-enwe Ndị nhazi 5nm dị njikere maka afọ ọzọ, ugbu a ụlọ ọrụ ekwuputala na ọ bidola mmepụta nke usoro ya nke abụọ 7nm +.
Usoro 7nm + na - ewere site na teknụzụ 7nm ejiri na chipsets flagship taa dị ka Kirin 980, nke Bionic A12 na Snapdragon 855.
Companylọ ọrụ na-eji Akwụkwọ akụkọ EUV maka oge izizi na imepụta ya. Nke a gbagwojuru anya ma dị elu karịa nke a na-eji na arụmọrụ arụmọrụ ugbu a. (Chọpụta: Ndị na-arụ ọrụ kacha mma maka smartphones, dị ka Master Lu si kwuo)
Huawei Kirin 980 7nm n'ụzọ zuru ezu
A ga-eji usoro 7nm + mee ihe na ọgbọ Apple A13 nke ọzọ Kirin 985 Huawei, nke a ga-ewepụtara mgbe afọ a gasịrị, yana Apple. Enwekwara ike itinye ya n'ọrụ na onye nọchiri Qualcomm SD855 dị ugbu a.
N'otu akụkọ na-adịbeghị anya, ọtụtụ akụkọ kwuru nke ahụ TSMC ga-aga n'ihu na-enye Huawei akụkụ maka Kirin 985 na-abịanụ a ga-eji na agbarịta 30 na ọkọlọtọ ndị a, ndị na-anọchi nke otu a sitere na ụlọ ọrụ ndị China. Ekwenyela nke a, n'etiti nrụgide na-arịwanye elu nke gọọmentị United States na ndị mmekọ iji wee jụ nkà na ụzụ Huawei.
N'aka nke ọzọ, ka anyị na-ele na mbido, companylọ ọrụ ahụ amalitekwala mmepụta mbụ nke 5nm usoro SoC na teknụzụ EUV. A na-atụ anya imepụta Mass ga-amalite na Q2020 5, yabụ site na etiti afọ na-abịanụ, anyị kwesịrị ịmalite ịhụ ibe chipsets 2020nm TSMC na ahịa, gburugburu June XNUMX.
MediaTek weputara ihe ngosi 5G nke mbu ya na 2020
N'ihi mmegharị ndị a, o doro anya na Firmlọ ọrụ Taiwanese na-ezube ịnọgide na-abụ isi nhọrọ ịhọrọ n'etiti ndị na-emepụta chipset iji zụlite ndị nhazi ya maka ekwentị. Qualcomm, Huawei na Apple bụ atọ n'ime ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » TSMC bidoro imepụta igwe mmadụ nke ọgbọ abụọ 7nm + mgbawa
Vivo Y15: ika ohuru ohuru a